Apple dia manavao ny fiaraha-miasa amin'i Hermès amin'ny alàlan'ny fandefasana fehin-kibo vaovao | Vaovao IPhone
Apple dia manavao ny fiaraha-miasa amin'i Hermès amin'ny alàlan'ny fandefasana fehin-kibo vaovao
Nandritra ny fampisehoana ny taranaka faharoa an'ny Apple Watch, antsoina hoe Series 2, dia hitantsika ny fomba Ny orinasa any Cupertino dia manohy ny fiaraha-miasa amin'i Hermès ary nanararaotra ny hetsika mba handefasana fehin-kibo vaovao ho an'ny Apple Watch. Ireo fehikibo vokarin'i Hermès dia mirehareha amin'ny fanaovana asa-tanana avy amin'ny hoditra avo lenta, izay manome antsika tanjaka sy faharetana miavaka.
Ireo fehy vaovao dia aingam-panahy avy amin'ny maodely Hermès Clipper, Cape Cod ary Espace. Ireo vokatra ireo misongadina amin'ny fahamendrehany, ny asany ary ny fahatsorany feno fahendrena. Ny maodely rehetra eo ambanin'ny aegis an'ny orinasa frantsay dia misy vy tsy misy fangarony miaraka amin'ny sehatra manokana isan-karazany amin'ny marika.
1 Hermes Manchette buckle roa
2 Hermes Simple Tour fametrahana Buckle
3 Hermès Double Tour
4 Fitsidihana tsotra Hermesy
Hermes Manchette buckle roa
Amin'ity indray mitoraka ity, ny orinasa dia nahazo aingam-panahy avy amin'ny famolavolana ny kapany Hermès. Ity fehin-kibo ity dia manome antsika ny fehin-kibo roa izay mifamatotra toy ny fonon-tànana amin'ny hatotanantsika. Tsy misy raha tsy ho an'ny Tranga 38 mm misy maodely vy tsy misy fangarony ary fehy hoditra Étoupe Swift. Azo vidiana misaraka. Vidiny: 1.769 euro.
Hermes Simple Tour fametrahana Buckle
Hermes dia namerina ny fatorana mahazatra an'ny orinasa. Ity fehin-kibo ity dia manafina ny visa apetraka amin'ny alàlan'ny fanindriana amin'ny sisiny. Tsy misy raha tsy ho an'ny Modely 42 mm sy hoditra Barcina hoditra Fauve. Vidiny: 1.619 euro.
Malahelo ny fehin-kibo roa mifatotra amin'ny hatotanako aho. Azo alaina miaraka amin'ny Trano vy tsy metaly 38 mm amin'ny loko Étoupe na loko Barcina hoditra Fauve. Toy ny maodely fatorana hafa, dia azo vidiana tsy miankina ihany koa izy ireo. Vidiny: 1.519 euro.
Fitsidihana tsotra Hermesy
Ny famolavolana sonia Hermes mahazatra dia mampiseho antsika fehy entanin'ny lovan-tsoavaly mitazona ny tadin'ny lasely. Ny tadin'ity karazana ity dia azo amidy mitokana na miaraka amin'ny Apple Watch Series 2. Manomboka amin'ny 1.369 euro. Misy amin'ny safidy maromaro izy io:
Trangam-by tsy misy fangarony 38mm ary fehin-kibo hoditra Epsom ihany no Rose Jaipur
Trangam-by tsy misy fangarony 38 na 42 mm ary tady hoditra Barcina miloko Fauve.
Tady vy vy 42mm sy Feu miloko fehy vita amin'ny hoditra Epsom tsirairay.
Ity fehy ity dia tafiditra ao amin'ny maodely Apple Watch Hermès rehetra. Izy io dia maivana, tsy tantera-drano ary malefaka, amin'ny loko volomboasary Hermés tsy azo iadian-kevitra, mety tsara amin'ny fanatanjahan-tena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Apple dia manavao ny fiaraha-miasa amin'i Hermès amin'ny alàlan'ny fandefasana fehin-kibo vaovao
Fahagagana ity: mampihena ny vidin'ny elanelana iPad ny Apple
Aza mipirina tampoka ary jereo ny vaovao Keynote ao anatin'ny 107 segondra